जमिनभन्दा तीन हजार फुट तल बनेको एउटा अद्भुत गाउँ, जहाँ खच्चड र हेलिकोप्टरबाट मात्र पुग्न सकिन्छ | Rajmarga
जमिनभन्दा तीन हजार फुट तल बनेको एउटा अद्भुत गाउँ, जहाँ खच्चड र हेलिकोप्टरबाट मात्र पुग्न सकिन्छ
गाउँघर आफैमा सुन्दर हुन्छ । यद्यपि गाउँलै जिन्दगी सहरी रहनसहनको तुलनामा टिक्दैन, किनभने त्यहाँ सहरमा जस्तो सुखसुविधाहरु हुँदैन । त्यसैले मानिसहरु गाउँ छाडेर सहरतिर दौडिने गर्दछन्।
तर, आज हामी तपाईलाई संसारको सबैभन्दा शक्तिशाली मुलुक अमेरिकाको यस्तो गाउँको यात्रा गराउनेछौ, जुन जमिनको सतहभन्दा तीन हजार फूट तल अवस्थित छ।
अमेरिकाको चर्चित ग्रैन्ड कैनियन हेर्नका लागि संसारभरबाट करिब ५५ लाख मानिस एरिजोना पुग्ने गर्दछन् । तर, यहीमध्ये एउटा गहिरो खाल्डोमा हवासु कैनियन नजिक ‘सुपाई’ नामको एउटा निकै पूरानो गाउँ छ। यहाँको जनसंख्या जम्मा २०८ छ।
यो गाउँ जमिनको सहतमा होइन, बरु ग्रैन्ड कैनियनभित्र करिब तीन हजार फुटको गहिराइमा अवस्थित छ। पुरै अमेरिकामा यो एउटै मात्रा गाउँ हो, जहाँ अहिले पनि चिटठीपत्र ल्याउन र लैजान लामो समय लाग्ने गर्दछ । यहाँ अहिले पनि मानिसहरु चिट्ठीपत्रहरु खच्चडलाई बोकाएर गाउँसम्म ल्याउने र लैजाने गर्दछन्।
चिट्ठीपत्र लैजानका लागि खच्चड गाडीको प्रयोग कहिलेबाट सुरु भयो, यकिन गरेर भन्न मुश्किल छ । खच्चड गाडीमा युनाइटेड स्टेट पोस्टल सर्भिसको छाप लागेको हुन्छ ।
गाउँ पुग्न खच्चड वा सिधा हेलिकोप्टर
सुपाई गाउँको तारसहरसम्म सडकसँग जोडिन पाएको छैन । यहाँसम्म पुग्ने बाटो निकै खराब छ। गाउँको सबैभन्दा नजिकको सडक पनि आड किलोमिटर टाढा छ । यहाँसम्म पुग्नका लागि या त हेलिकोप्टरको सहयोग लिनुपर्ने हुन्छ वा खच्चडको । यदि हिम्मत छ भने पैदलै हिडेर पनि यो गाउँ पुग्न सकिन्छ।
सुपाई गाउँमा ग्रैन्ड कैनियमको गहिरो रहस्य लुकेको छ। यो गाउँ चारैतिरबाट डुला र उच्च पहाडले घेरिएको छ। करिब पाँच पानीको झरनाले गाउँको सन्दरता थप बढाएको छ । गहिरो खाडलमा लुकेको यो गाउँ करिब एक हजार वर्षदेखि आवाद छ । यहाँ अमेरिकी मूल निवासी रेड इन्डियन बस्छन्।
गाउँमा बस्ने जनजातिको नामकरण गाउँको सुन्दरताको आधारमा भएको छ। हवासुपाईको अर्थ हो, नीलो र हरियो पानीवाला मानिस् । यहाँका निवासी गाउँको पानीलाई पवित्र मान्दछन् । यहाँबाट निस्कने पानीबाट यी जनजातिको जन्म भएको विश्वास गरिन्छ ।
गाउँसम्म पुग्नका लागि खरैखर झाडीबीच भूलभुलैयाजस्तै बाटो भएर हिड्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो तलामाथि भएको बाटोबाट हिड्दा यो पनि महशुस हुँदैन कि अगाडि स्वर्गजस्तै स्थान फेला पर्नेछ । अगाडि तपाईले देख्नु हुनेछ एउडा ठुलो साइनबोर्ड, जसमा लेखिएको हुनेछ–सुपाईमा तपाईलाई स्वागत छ।
२०औं शताब्दीसम्म बाहिरी मानिसलाई रोक
यो गाउँ पूर्णरुपमा ट्राफिक शोरबाट मुक्त छ। खच्चड र घोडा गाउँको गल्लीहरुमा देखिन्छन् । यो गाउँमा भलै सहरजस्तो सुविधा छैन तर एक शान्तिपूर्ण माहौलमा बस्न सकिने सबै सहुलियत छ । यहाँ पोस्ट अफिस छ, क्याफे छ, दुई वटा चर्च छ, प्राथमिक विद्यालय छ, किराना पसल छ।
यहाँ निवासी मानिसहरु अहिले पनि हवासुपाई भाषा बोल्दछन् । यहाँ सीमी र मकैको खेती गरिन्छ । रोजगारीका लागि टोकरी बनिन्छ र सहरमा बेचिन्छ । टोकरी बनाउनु यहाँको परम्परागत व्यवसाय हो।
कयौ शताब्दीदेखि मानिसहरु यो विचित्रको गाउँ हेर्दै आएका छन् ।२०औं शताब्दीसम्म यो गाउँमा बाहिरबाट मानिसहरुलाई आउन रोक लगाइएको थियो । तर आम्दानी बढाउनका लागि उनीहरुले करिब एक सय वर्ष पहिला आफ्नो गाउँको ढोका बाहिरबाट आउनेहरुका लागि पनि खुला गरे ।
खच्चडको स्वास्थ्यमा असर
हरेक वर्ष करिब २० हजार मानिस यहाँको प्राकृतिक सुन्दरता र यहाँको जीवनशैली अवलोकन गर्न आउने गर्दछन् । तर यहाँसम्म पुग्नका लागि सबै पर्यटकले हवासुपाईको ट्राभल काउन्सिलको अनुमति लिनुपर्ने हुन्छ । फेब्रुअरी महिनादेखि नोभेम्बरसम्म पर्यटकहरु यहाँका नागरिकहरुको घरमा बस्न सक्छन् । जुनेली रातमा झरनाबाट झर्दै गरेको पानीको आवाजका साथ गाउँको सुन्दरताको अवलोकन गरेर आनन्द लिन सकिन्छ।
हवासुपाई गाउँबासीको जीवन सहज बनाउन खच्चडका लागि विगत दशकदेखि आवाज उठिरहेको छ । पर्यटकहरुको बढ्दो संख्याका साथ यी खच्चडहरुमाथि दबाद बढन लागेको छ। खच्चडबाट आवश्यकताभन्दा बढी काम लिन थालिएको छ। घोडा र खच्चडहरुको स्वास्थ्यलाई नजरअन्दाज गरेर बिना खानपान आठ किलोमिटर टाढासम्म हिडाइन्छ । यद्यपि यस्तो सबैले गर्दैनन् ।
त्यसैले हवासुपाई ट्राभल काउन्सिलले यस्तो टिम बनाएको छ, जसले कारोबारमा प्रयोग हुने सबै जनावरको हेरचाह गर्ने गर्दछ । यसले १ देखि १० नम्बरको अनुपातमा जनावरको स्वास्थ्यसम्बन्धी प्रमाणपत्र दिन्छ ।
एरिजोना त्यसै पनि सुख्खा राज्य हो । यहाँको ग्रैन्ड कैनियनमा वर्षा निकै कम हुन्छ । वर्षेनी वर्षा ९ इञ्चभन्दा पनि कम रेकर्ड गरिन्छ ।
नीलो पानीको रहस्य
वैज्ञानिकहरु पत्ता लगाउने कोशिस गरिरहका छन् कि यो मरुभूमि क्षेत्रमा नीलो पानीको झरना यति धेरै वर्षदेखि कसरी रह्यो । पानीमा यो नीला रंग कहाँबाट आउँछ । वास्तवमा उहाँकोचट्टान र जमिनमा चुना पत्थर प्रचुर मात्रामा पाइन्छ । पत्थरमा पानी झरेर जब हावा मिल्दछ तब एकप्रकारको रसायनिक प्रतिक्रिया हुन्छ र क्याल्सियम कार्बोनेट बन्न लाग्दछ । सुर्यको प्रकाश परेपछि त्यही पानी नीलो रंगको देखिन्छ ।
युरोपियनहरु अमेरिका आएर बस्नुअघि हवासुपाईको क्षेत्रफल गरिब १६ लाख एकड थियो। तर यो क्षेत्रको प्राकृतिक सम्पदामाथि जब सरकार र सहरबासीको नजर प¥यो तब उनीहरुले कब्जा गर्न सुरु गरे । व्यापारीहरुले यहाँका निवासी धेरै जनजातिहरुलाई बजरजस्ती हटाए । उनीहरुको अधिकारका लागि हवासुपाईका आदिवासीहरुले लामो लडाई लडे । १९१९ मा अमेरिकी राष्ट्रपति थियोडोर रुजवेल्टले ग्रैन्ड कैनियनलाई नेशनल पार्क सर्भिसको हिस्सा बनाए । सरकारको योजनाअन्तर्गत यहाँ धेरै मानिसलाई रोजगारी प्राप्त भयो । तर यसका बावजुद आफ्नो जमिनका लागि उनीहरुले संघर्ष जारी राखे।
सन् १९७५ मा राष्ट्रपति जेराल्ड फोर्डले सम्झौताअन्तर्गत १,८५,००० एकड जमिनको नियन्त्रण हवासुपाईका नागरिकलाई दिए । अहिले यहाँका नागरिकसँग मात्र कैनियनसम्म सीमित छैनन्। अरु यहाँका जंगलमा शिकार गर्ने अधिकार पनि उनीहरुलाई प्राप्त छ।
अहिले हवासुपाईको पहिचान एउटा सुन्दर स्थानका रुपमा छ। यहाँका नागरिक आफ्नो सरकार आफै चलाउँछन् । ट्राभल काउन्सिलको चुनाव गाउँबासीले गर्छन् र आफ्नो कानुन आफै बनाउँछन्।
हालैका वर्षहरुमा हवासुपाईमा सबैभन्दा ठुलो खतरा बाढीको छ। सन् २००८ र २०१० मा यहाँ जबरजस्त वर्षा भएको थियो । जसमा धेरै पर्यटक फसेका थिए । सुपाईलाई बाहिरी क्षेत्रसँग जोड्ने बाटो पनि नराम्रोसँग ध्वस्त भएको थियो । २०११ मा यहाँका नागरिकले एरिजोनाका गभर्नरका साथ अमेरिकी सरकारसँग आर्थिक सहयोग माग गरेका थिए । सरकारले उनीहरुलाई करिब १६ लाख डलर आर्थिक सहयोग पनि गरेको थियो ।
हजार वर्षदेखि यहाँ बाढी र सहरमा बस्नेहरु आउने र जाने क्रम जारी छ। तर हवासुपाईका नागरिक यहाँ शान्तपूर्वक रहेका छन् । यहाँका नागरिकहरुका अनुसार उनीहरु आफ्नो पूर्वजहरुको घरमा बस्छन् । यहाँका झरना र जमिनमा उनीहरुका पूर्खा बस्छन् । त्यसैले उनीहरु यही रहनेछन् । बीबीसी हिन्दी
Previous post: किन रातारात गायब हुन्छन् किशोरी ? कहाँ जान्छन् ?
Next post: फिलिपिन्सको यौन बजारः मोज गर्न आए भुँडी बोकाएर गए, बच्चाको बेहाल